Mee ka mbọ ịre ahịa 2022 dị elu site na njikwa nkwenye | Martech Zone
2021 abụrụla nke a na-atụghị anya ya dịka 2020, dịka ọtụtụ okwu ọhụrụ na-ama ndị na-ere ahịa azụmaahịa aka. Ndị na-ere ahịa ga-adị mkpa ka ha nọgide na-agba ọsọ ma na-anabata ihe ịma aka ochie na nke ọhụrụ ka ha na-agbalị imekwu ihe na obere.
COVID-19 gbanwere ụzọ ndị mmadụ si achọpụta na ịzụ ahịa - ugbu a gbakwunye ike na-emekọ ọnụ nke ụdị Omicron, ọgba aghara na-enye ndị ahịa na mgbanwe mmetụta nke ndị ahịa na egwuregwu mgbagwoju anya. Ndị na-ere ahịa na-achọ ijide ihe ndị a na-achọsi ike na-eme mgbanwe site n'ịgbanwe oge nke mgbasa ozi ahịa ha, na-ebelata ego mgbasa ozi n'ihi ihe ịma aka ọkọnọ, na-apụ n'ichepụta ngwaahịa kpọmkwem na ịnakwere ụda "anọpụ iche ma nwee olileanya".
Otú ọ dị, tupu ndị na-ere ahịa na-eche echiche banyere ịkwanye iziga ozi email ọzọ ma ọ bụ mgbasa ozi ederede, ha kwesịrị ijide n'aka na ha na-agbaso omume kachasị mma na nkwurịta okwu ndị ahịa na ụkpụrụ njikwa nkwenye.
Kedu ihe bụ njikwa nkwenye?
Ijikwa nkwenye bụ usoro eji eme ka omume nnakọta nkwenye gị rụọ ọrụ, na-eme ka ọ dịkwuo mfe iwulite ntụkwasị obi, kpalie ndị ahịa ịbata na jikwaa nrube isi na nkọwapụta nkwenye ha.
Gịnị kpatara njikwa nkwenye ji dị mkpa?
A nkwenye njikwa n'elu ikpo okwu (CMP) bụ ngwá ọrụ na-eme ka ụlọ ọrụ na-erube isi na ụkpụrụ nkwenye nzikọrịta ozi dị mkpa, dị ka nke GDPR na TCPA. CMP bụ ngwá ọrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị mbipụta nwere ike iji maka ịnakọta nkwenye ndị ahịa. Ọ na-enyekwa aka na ijikwa data na ịkekọrịta ya na ederede na ndị na-enye ọrụ email. Maka webụsaịtị nwere puku kwuru puku ndị ọbịa kwa ụbọchị ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-eziga iri puku kwuru iri puku ozi ịntanetị ma ọ bụ ozi ederede kwa ọnwa, iji CMP dị mfe ịnakọta nkwenye site na imezi usoro a. Nke ahụ na-eme ka ọ bụrụ ụzọ na-arụ ọrụ nke ọma na nke dị ọnụ ahịa iji nọgide na-ekwenye ekwenye ma na-enyere aka ime ka ahịrị nkwurịta okwu ghere oghe.
Ọ dị oke mkpa na ndị na-ere ahịa na-arụkọ ọrụ na ndị mmekọ tụkwasịrị obi bụ ndị ọkachamara na ngwọta njikwa nkwenye, karịsịa iji wuo na ịkwado ikpo okwu na-echebara iwu nke ikike niile dị mkpa, gụnyere United States, Canada, EU na ndị ọzọ. Inwe usoro dị otú ahụ na-ebelata ohere nke imebi iwu data nke obodo ọ bụla ma ọ bụ ikike nke ụlọ ọrụ gị nwere atụmanya na ndị ahịa. Ejiri nrube isi site na imewe wuo nyiwe dị elu nke oge a, na-ahụ na ka ụkpụrụ na-agbanwe ma na-agbanwe, otu ahụ ka nnabata njikwa nkwenye nke ika kwesịrị ekwesị.
Ijikwa nkwenye nke ọma dịkwa mkpa n'ihi mgbanwe ahụ pụọ na iji data kuki ndị ọzọ na ịnakọta data ndị ọzọ ozugbo n'aka ndị ahịa.
Ịpụ na Data nke Ndị Ọzọ
A na-alụ ọgụ ruo oge ụfọdụ ugbu a maka ikike mmadụ nwere ịnweta nzuzo data. Ọzọkwa, enwere mgbagwoju anya nzuzo/nhazi nke dị. Nke a na-ezo aka n'eziokwu na ndị na-azụ ahịa chọrọ nzuzo data na ịmara na data ha adịghị mma. Otú ọ dị, n'otu oge ahụ, anyị na-ebi na ụwa dijitalụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe mmetụta nke ukwuu na ozi niile na-abịakwute ha kwa ụbọchị. Ya mere, ha na-achọkwa ka ozi bụrụ ahaziri onwe yana mkpa ma nwee atụmanya na azụmahịa ga-enye ha ahụmahụ dị ukwuu nke ndị ahịa.
N'ihi ya, enweela mgbanwe dị mkpa n'ụzọ ụlọ ọrụ na-anakọta na iji data nkeonwe. Ụlọ ọrụ na ndị na-ere ahịa na-elekwasị anya ugbu a na ịnakwere nchịkọta nke data nke mbụ. Ụdị data a bụ ozi onye ahịa n'efu na ụma na-ekerịta akara ha tụkwasịrị obi. Ọ nwere ike ịgụnye nghọta nkeonwe dị ka mmasị, nzaghachi, ozi profaịlụ, mmasị, nkwenye, na ebumnuche ịzụrụ.
Dị ka ụlọ ọrụ na-ejigide ọnọdụ nke nghọta ihe mere ha ji na-anakọta ụdị data a ma na-enye ndị ahịa uru na nkwụghachi maka ịkekọrịta data ha, ha na-enwetakwu ntụkwasị obi n'aka ndị ahịa ha. Nke a na-abawanye ọchịchọ ha ịkesakwu data wee banye na ịnweta ozi dị mkpa sitere na ika ahụ.
Ụzọ ọzọ ụlọ ọrụ na-esi na-amụba ntụkwasị obi n'ebe ndị ahịa nọ bụ site n'ime ka ha na-emelite ha site n'inwe mmelite na ngwa ahịa na ngwaahịa ndị ha nwere mmasị ịzụ ahịa. Mkparịta ụka a doro anya gbasara mmelite mbupu na-enyere aka ijikwa atụmanya ziri ezi na mbufe, ma ọ bụ ọbụna igbu oge na mbupu.
Atụmatụ maka ịga nke ọma ire ahịa 2022
Ilekwasị anya na atụmatụ ndị a dị mkpa ọ bụghị naanị maka ijikwa usoro ịzụ ahịa oge niile, kamakwa n'ime atụmatụ maka ọrụ ahịa ahịa 2022 na mgbasawanye mar-tech. Nkeji nke anọ bụ oge mgbe ụdịrị na-ezute ndị otu ha na-ere ahịa iji hụ na nkwukọrịta na-aga n'ihu wee chọpụta atụmatụ maka afọ na-abịa iji meziwanye ahụmịhe ndị ahịa n'ozuzu ya, ịbawanye ego ha nwetara na idobe ahịrị nkwukọrịta mepere emepe.
Site n'itinye usoro ndị a n'uche, gị na akara gị ga-abụ nzọụkwụ n'ihu asọmpi maka mmalite nke 2022!
Maka ozi ndị ọzọ na PossibleNOW's nkwenye njikwa n'elu ikpo okwu:
Rịọ ihe ngosi enwere ike ugbu a
Tags: cmpnjikwa nkwenyenkwenye njikwa n'elu ikpo okwungwanrọ njikwa nkwenyenzuzo nke ndị ahịakukikuki nke mbụekwe omume ugbu aụkpụrụkuki ndị otu efu